Andinin-tsoratra masina: Mety ho hita izy - Countdown to the Kingdom
Nandritra ny herinandro maro momba ny Countdown to the Kingdom, ireo mpahita izay tsy mifankahalala, miteny amin'ny fiteny samy hafa, izay mipetraka amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao… dia manome hafatra tsy miova: tsy misy intsony ny fotoana sisa. Ny zava-nitranga hatry ny ela nambaran'ny Soratra Masina sy ireo fanambarana ara-paminaniana dia tanterahina rehefa miresaka isika.
Tonga ny fotoana, miposaka ny andro. Tonga ny fara tampony ho anao izay monina amin'ny tany! Tonga ny fotoana, antomotra ny andro: fotoana fampitahorana fa tsy fifaliana… indro, ny andron'i Jehovah! Jereo, ho avy ny farany! Miroborobo tanteraka ny fandikan-dalàna, miroborobo ny fieboeboana, tafakatra ny herisetra hanohanana ny faharatsiana. Tsy ho ela izy io, ary tsy hitaredretra. Tonga ny fotoana, miposaka ny andro… (Ezekiel 7:5-7, 10-12)
Noho izany, tsy mahagaga raha miaraka am-pandrenesana izany amin'ireo mpahita eran'izao tontolo izao, ny famakiana faobe dia mifanindran-dàlana amin'io hafatra io:
Mitadiava an'i Jehovah, dieny mbola hita Izy, antsoy izy, dieny mbola akaiky izy. Avelao ny mpaniratsira hahafoy ny lalany, ary ny ratsy fanahy hahafoy ny heviny; Aoka izy hitodika amin'i Jehovah hamindra fo; ho an'Andriamanitsika, izay malala-tanana amin'ny famelana heloka. (Famakiana lamesa voalohany amin'ny Alahady)
Satria firenena maro no manomboka hidina any amin'ny hidin-trano indray (amin'ny toerana sasany, tsy nesorina tanteraka mihitsy izany), dia miala maina ny fotoana hidirana amin'ny fiaiken-keloka sy handray an'i Jesosy ao amin'ny Eokaristia. Aza misalasala, raha izany! Aza mangataka andro! Mandehana haingana amin'ireo Sakramenta tsy mampino ireo rehefa mijery ny fanahinao sy ireo faritra amin'ny fiainanao izay nihemotra ho amin'ny ota, kamo ary fahazaran-dratsy. Ilay “fotoana famindram-po”Mifarana isika izao, saingy mbola tsy vita! Miandry anao amin'ny tànana malalaka ny Ray. Aza manao fialan-tsiny intsony momba ny fieken-keloka ataonao. Ny fiainana miaraka amin'ny feon'ny fieritreretana mikorontana sy ny fanahy tsy milamina dia tsy mahazo aina bebe kokoa. Aza manao fialan-tsiny intsony amin'ny tsy fandehanana any Lamesa sy fandraisana ny Mofon'aina. Ahoana no tsy hiraharaha ireo teny ireo…
Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay, ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany… Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary Izaho ao aminy. (Jaona 6: 54, 56)
Ary noho izany, izao no fotoana tokony hitanjahana eo anatrehan'Andriamanitra, marina tanteraka momba ny toe-panahin'ny tena:
Akaiky izay rehetra miantso azy ny Tompo, dia izay rehetra miantso azy amin'ny fahamarinana. (Salamo Alahady)
Akaikin'ireo manao ny marina izy, indrindra fa ny mahantra ara-panahiny. Manandrana manala baraka antsika i Satana, manao izay hanafenantsika ny fahotantsika amin'Andriamanitra sy hiampangana antsika. Jesosy kosa dia nitady ilay mpanota, nangataka ny olona toy izany hiara-hisakafo Aminy ary avelao Izy hitia azy ireo hiverina amin'ny fahalavorariana. Mitady ilay very izy, “Jereo ny ratrako? Jereo hoe hatraiza ny halehiben'ny fitiavako anao? Avia ankehitriny, sasao ny tenanareo ho madio amin'ny riaky ny Rà sy ny rano izay mivoaka avy amin'ny Foko mba hanasitranako anao sy hamerenako anao amin'ny laoniny. Fanomezana maimaimpoana io, tsy misy vidiny. Come to me…"
Fa mihoatra noho izany, mihoatra ny famelana ny helony, Andriamanitra dia maniry ihany koa “Manafaha anay amin'ny ratsy”;Matt 6: 13 hanamasinana sy hanovana antsikacf. Rom 12: 2 mba tsy hamelana antsika fotsiny fa hanome taratra ny fiainany.cf. 2 Kôr 4: 7-10 Araka ny nolazain'i St. Paul ao amin'ny Famakiana faharoa omaly:
Kristy dia hasandratra ao amin'ny vatako, na amin'ny fiainana izany na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no fiainana amiko, ary ny fahafatesana no ahazoana tombony.
Rahalahy sy ranabavy, izany isika teo am-baravarana amin'ireo hetsika lehibe izay efa nanomboka nanova an'izao tontolo izao araka ny ahalalantsika azy. Efa lasa isika Ny Toeran'ny tsy fiverenana. manaraka fanaintainan'ny mpiasa tonga amintsika. Aza mangataka andro. Mitadiava an'ny Tompo dieny mbola hita Izy, antsoy Izy raha akaiky Izy…
Ary koa: mamaky Amin'ny fanaovana fiaiken-keloka tsara nataon'i Mark Mallett tao Ilay Teny Ankehitriny.
↑1 Matt 6: 13
↑2 cf. Rom 12: 2
↑3 cf. 2 Kôr 4: 7-10
← Pedro Regis - Miverena haingana!
Ao amin'ny Threshold →